Wyndham Grand Yangon Hotel - Amazing Yangon
Home /Promotion/Wyndham Grand Yangon Hotel
Wedding ချစ်သူတို့… စောင့်မျှော်နေတာသိလို့…
“June Wedding Promotion” ပြန်လာပါပြီနော်။
၂၀၁၉ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ..၃၀ရက် အတွင်း
မင်္ဂလာဆောင်ဘိုကင်ကြိုယူထားမယ်ဆို.. Wedding Tea နှင့် Dinner Package အမျိုးအစားအလိုက်အောက်ပါ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို ခံစားရမှာပါနော်။
?Tea Package များထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်ရာ Package ကို ဘိုကင်တင်လိုက်ရုံနှင့် >>>> ၁၀% မှ ၁၅% လျှော့ဈေးကို ခံစားခွင့်။
?Dinner Package များထဲမှာ မိမိကြိုက်နှစ်ရာ Package ကို ဘိုကင်တင်လိုက်ရုံနှင့် >> အများဆုံး လူ ၉ ယောက်စာပါတဲ့ စာပွဲဝိုင်း ၃ ဝိုင်း ကို အပိုထပ်ဆောင်းပေး ဦးမယ့်အပြင်… corkage အဖိုးအခအတွက်ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်ရဦးမှာပါနော်။
(အဆိုပါ Dinner Package အတွက်… အနည်းဆုံး Guaranteed Tables 30 ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
အတိတ်နိမိတ်ကောင်းစေမယ့်… Wedding Packages လေးတွေထဲက သင်ကြိုက်ရာရွေးလိုက်တော့နော်။
1.Wedding Tea Packages
(A). Nay & La Package (နေနှင့်လ ပက်ကေ့ခ်ျ)
(B) Shwe & Mya Package (ရွှေနှင့်မြ ပက်ကေ့ခ်ျ)
(C) Aye Ahtu Pu Amya Package (အေးအတူပူအမျှ ပက်ကေ့ခ်ျ)
2. Wedding Dinner Packages
(A). Eternal Love Package (ထာဝရအချစ် ပက်ကေ့ခ်ျ)
(B). Everlasting Love Package (တည်တံ့ခိုင်မြဲအချစ် ပက်ကေ့ခ်ျ)
(C). Endless Love Package (အဆုံးမဲ့အချစ် ပက်ကေ့ခ်ျ)
Booking Period – 1st to 30th June 2019
သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့… မင်္ဂလာနေ့လေးကို လက်မလွှတ်စေဖို့လဲ…Phone – (+95) 01-9377188 (သို့) [email protected] ကို
ဈေးနှုန်းစုံစမ်းရန် >>>> http://bit.ly/signupforurevents
Hello, All! Our “June” Wedding Promotion is Back.
Book your weddings with us from now till 30th June 2019 and enjoy the wow benefits.
Signed up couple can get the following benefits during the valid booking period.
1. Choose any of our wedding tea packages and get 10%-15% discount
2. Choose any of our wedding lunch/dinner packages and get maximum3complimentary tables for minimum guaranteed 30 tables plus free corkage charges.
Call us today (+95) 01-9377188 for your further inquiry.
We look forward to your big with us at our Wyndham Grand Yangon.
Max+ strengthens bonds with teenagers with new hangout space in downtown Yangon
Kelvin’s Pool Bar